Wararka - Aqoonta Xirmada ReYoung: Maxaa ka dhigaya baakad kafee ah oo wanaagsan
1.Baakad kafeega shaqaynaysa
Baakadaha qaxwaha ugu fiican ma aha oo kaliya muuqaal soo jiidasho leh, laakiin sidoo kale shaqeyn.
Baakadaha wanaagsan ayaa ilaalin kara kafeega, hadday tahay mid la shiiday, la dhadhamiyo, ama digirta kafeega.Markaad dooranayso alaabta baakadaha iyo qaabka, waa inaad isticmaashaa badbaadada alaabta inta lagu jiro gaadiidka iyo kaydinta tixraac ahaan.
Haddii aad dooratid qalabka ugu horumarsan ama alaabta dhaqameed, baakad wanaagsan ayaa ku ilaalin karta qaxwadaada mid cusub oo laga ilaaliyo isla marka alaabtu dhalatay.
2. Baakadu waxay wanaajisaa astaantaada
Naqshadaynta iyo faahfaahinta baakadu waxay kor u qaadi kartaa astaantaada iyo kafeegaaga.
Markaad naqshadeyneyso baakadaha, waxaad dooran kartaa inaad calaamadda ku dhejiso dhinaca hore iyo bartamaha naqshadeynta, ama waxaad dooran kartaa meel aad u jilicsan.Ku muuji qaybaha ugu xiisaha badan ee shirkaddaada baakadahaaga, sida meelaha digirta laga soo goosto, cabbir kasta oo ilaalinta deegaanka ee astaantaada, iyo dhadhanka gaarka ah.
Isticmaal baakooyinkaaga si aad kor ugu qaaddo qiimaha iyo sheekada macaamiisha-macaamiishaada waxay soo jiidan doonaan alaabtaada, waxay aqoonsan doonaan astaantaada, waxayna aad u jeclaan doonaan inay iibsadaan kafeega mustaqbalka.
3. Nakhshad baakad ayaa kor u qaadi doonta alaabtaada
Baakadaha wanaagsan ayaa ka dhigaya kafeegaaga mid gaar ah.Waxay soo jiidan kartaa dareenka macaamiisha waxayna u soo jiidi kartaa alaabtaada halkii ay ka ahaan lahayd kuwa kula tartamaya.
In kasta oo aan jeclaan lahayn in aan rumaysanno in aynaan ku xukumin dadka muuqaalkooda, inta badan xukunnadayada ku saabsan badeecada waxay ku saleysan yihiin naqshadeeda.Cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa in ka hor inta aanay dadku samayn go'aan miyir leh, ay go'aan ku gaadhaan toddoba ilbiriqsi gudahood.Kaliya waxay qaadataa dhowr daqiiqo in macaamiishu go'aansadaan inay rabaan inay isticmaalaan alaabtaada iyo in kale, baakadu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa doorashada.
Goobaha tafaariiqda, baakadaha kafeega ayaa ah dareenka ugu horreeya.Markaad horumarinayso summadaada, helitaanka aragtida ugu horreysa ee togan ayaa muhiim ah -in kasta oo baakadahaagu aanay saamaynayn tayada kafeega, inta badan macaamiisha waxaa haga hab-qurxineed.Haddii aysan si gaar ah u raadin qaxwadaada, waxay u badan tahay inay doortaan midka ugu muuqaal soo jiidashada leh ama xiisaha leh.
Baakadaha qaxwaha wanaagsan waxay xaqiijin kartaa badbaadada alaabtaada, kor u qaadida astaantaada, waxayna soo jiidan kartaa macaamiisha cusub - tani waa mid ka mid ah qalabka ugu awoodda badan ee kor u qaadida kafeega macaamiisha cusub.
4. U sheeg sheekada astaantaada adigoo isticmaalaya baakad kafee gaar ah
Marka lagu daro bilicda iyo soo jiidashada shaqeynta, baakadaha hal-abuurka leh ayaa sheegaya sheekada astaantaada iyo kafeegaaga.Marka ay macaamiishu iibsadaan kafeega, inta badan ma haystaan ​​soo-saare kafee khibrad leh si uu ugu hago si ay u fahmaan dhadhanka kala duwan iyo sifooyinka dubista.Taas bedelkeeda, baakadaha qaxwaha waa in ay macaamiisha u sheegaan wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay u ogaadaan-ma aha oo kaliya alaabta, laakiin sidoo kale qiimaha calaamadda.
1) Xagee buu ka yimaadaa
Macaamiishu waxay rabaan inay maalgashadaan alaabooyinka leh sheekooyinka.Ka dhig badeecadaada mid soo baxda adiga oo ku daraya walxaha bini'aadamka ee baakadaada.
Tusaale ahaan, waxaad ku qori kartaa asalka digirta kafeega ee baakadaha, sida udgoonka ubaxa ee isku dhafan ee Itoobiya ama qaxwada vaniljka ee Colombia.Haddii aad ka shaqeyso beer yar oo kafeega cadaalad ah, bixi macluumaadka beeralayda iyo hadafkooda.Tani waxay ka dhigeysaa astaantaada inay u muuqato inay ka badan tahay kaliya soo-saare kafeega-qorista sheekooyinka ku saabsan dadka ku jira baakadahaaga waxay gudbinayaan fariinta: Shirkaddaadu waxay xiisaynaysaa dadka iyo tayada, maaha kaliya faa'iidada.
Maaddaama ay bulshadu u horumarayso jihada deegaanka u saaxiibka ah oo waara, macaamiishu waxay sidoo kale ogyihiin saamaynta ay alaabtu ku leedahay deegaanka.
2) Sida ugu fiican ee qaxwada loogu raaxaysto
Ka caawi macaamiishaada inay fahmaan faraqa u dhexeeya mid kasta oo isku darka ah ku dar qoraal sharraxaad ah baakaddaada oo si faahfaahsan u sharax dhadhanka kala duwan ee ku qarsoon boorso kasta.
Nashqadaadu waa inay noqotaa mid hal abuur leh.Halkii aad qori lahayd habka ugu wanaagsan ee koob kafeega loo samayn karo, waxaad isticmaali kartaa sawiro nadiif ah, sida qaado iyo dhibco biyo ah.Garaafyada fudud, kuwa ugu yar ayaa gudbin kara macluumaadka lagama maarmaanka ah iyada oo aan keenin jahawareer muuqaal ah xirmada.
Haddii aad rabto inaad ogaato wax badan oo baakadaha waraaqaha ah, fadlan gal website-kayaga rasmiga ah wakhti kasta oo nala tasho si toos ah.
Waqtiga boostada: Dec-20-2021